चेल्सीका म्याटिच युनाइटेडमा आवद्द – Makalukhabar.com
भोज धेरै भएन श्वेता जी ?
मकालु खबर	 २०७७ माघ २ १३:०३
प्रधानमन्त्रीलाई योगेशको जवाफ- ‘केटाकेटीकै रगत र पसिनाले…
मकालु खबर	 २०७७ माघ ४ ०७:११
अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै मुख्यमन्त्री राई र पौडेल
चितवनमा बस र ट्रक ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते
बिदाइ सम्बोधनमा ट्रम्पले भने- ‘हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदैछ’
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रा लागि अवसर हो : कांग्रेस
कोराेनाको नयाँ स्वरुपबारे डा. पुनकाे सल्लाह : हेलचेक्र्याईं नगरौं
२१ दिनभित्र उखु किसानलाई भुक्तानी दिने सहमति, आन्दोलन स्थगित
चेल्सीका म्याटिच युनाइटेडमा आवद्द
२०७४ जेष्ठ १५ ००:०० प्रकाशित 13 0
काठमाडौं, साउन १७ । चेल्सीका मिडफिल्डर नेमान्जा म्याटिच म्यानचेस्टर युनाइटेडमा अनुबन्धित भएका छन् । म्याटिचलाई युनाइटेडले ३ बर्षको लागि क्लब भित्राएको हो ।
युनाइटेड र म्याटिचबीच सोमबार राती अनुबन्धन पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । म्याटिचलाई क्लब भित्राउन युनाइटेडले ४० मिलियन पाउण्ड रकम खर्च गरेको हो । युनाइटेडसंग अनुबन्धित भएपछि सर्बियाको राष्ट्रिय टोलीका सदस्य म्याटिचले युनाइटेडमा आबद्द हुन् पाउदा उत्साहित रहेको बताए ।
“म युनाइटेडको आगामी सिजनलाई लिएर निकै उत्साहित छु,” अनुबन्धपछि म्याटिचले भने, “मोउरिन्हो जस्तो प्रशिक्षकसँग पुन काम गर्न पाउनु मेरोलागि ठुलो अवसर हो, मैले यसलाई नकार्न सकिन ।” यस्तै उनले चेल्सीका समर्थकहरुलाई धन्यवाद दिदै नयाँ क्लबसँग नयाँ यात्रा गर्न तयार रहेको बताए ।
२८ वर्षीय म्याटिचले गत सिजन प्रिमियर लिगमा चेल्सीका लागि १ गोल गरेका थिए। उनले चेल्सीबाट ३५ खेल खेलेका थिए । उनी ट्रान्सफर विन्डोमा युनाइटेड आउने तेस्रो खेलाडी हुन् । यसअघी प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होले डिफेन्डर भिक्टर लिन्डेलफ फरवार्ड रोमेलु लुकाकुलाई क्लबमा ल्याएको थियो ।
अमेरिकाका ४६औं राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ आज